The New Life Mission - Zvidzidzo zveBhaibheri pamusoro pekuzvarwa patsva nemvura noMweya
" Pachena makangowanavo, ipai pachena " (Mateo 10:8)
Tinotenda kuti Bhaibheri, iro rine Testamente Yakare neTestamente Itsva badzi, rakafuridzirwa nemashoko eMweya Mutsvene, uye magwaro aro omene haana kutsvakurudzwa, uye kuti iShoko raMwari risingatadzikari uye rine masimba.
Tinotenda kuti Mwari vatatu-mumwe vanorarama nokusingaperi mukati mevanhu vatatu: Baba, Mwanakomana, noMweya Mutsvene.
Tinotenda kuti Adamu, uyo akasikwa nomufananidzo waMwari, akaedzwa naSatani, mwari wenyika ino, akabva awa. Nokuda kwechivi chaAdamu, vanhu vose vane chokuita nemhosva, vakaipiswa zvamazvirokwazvo, uyevo vanoda kupiwa hupenyu zvekare kuburikidza noMweya Mutsvene kuitira Ruponeso.
Tinotenda kuti Jesu Kristu ndivo Mwari, avo vakazvarwa nemhandara, vakabhapatidzwa naJohane Mubhapatidzi muRwizi Jorodani, vakaroverwa seGwaiana raMwari, vakazomuka zvakare kuvakafa, vakabva vakwira kudenga, uko kwavari kurumbidzwa parizvino vari kuruvoko rwerudyi rwaBaba.
Tinotenda kuti ruponeso rwune kuregererwa kwezvivi, kusanganisirwa kwekururama kwaKristu, uye nechipo chehupenyu husingaperi, rwunowanikwa kuburikidza nokutenda badzi, kwete nemabasa.
Tinotenda kuti kudzoka kwaJesu Kristu kwava pedyo, uye kuti kuchazova nokuonekwa uye munhu nemunhu achasangana nako.
Tinotenda kuti avo vakaponeswa vachava nokumutsirwa kuupenyu husingaperi, uye kumaropafadzo ekudenga; uyevo kuti avo vasina kuponeswa vachamutsirwa kumurango wekusingaperi, uye wavachaziva, kugehena.
Tinotenda kuti kereke, inova muviri waKristu, ine avo badzi vakava nokuzvarwa patsva, avo vakabhapatidzwa noMweya Mutsvene muna Kristu panguva yokupiwa hupenyu hutsva, avo vaanomirira ari kudenga uye vaachadzokera zvakare.
Tinotenda kuti Kristu akaraira kereke kuti iende munyika kuti indoparidzira evhangeri kuvanhu vose, uye kuvabhapatidza pamwe nekudzidzisa avo vanotenda.
Mibvunzo inowanzobvunzwa maererano neKutenda kweChiKristu